Dagaal culus oo Caawa maqrabkii ka billaabmay Xerooyinka ku yaalla agagaarka Wadada Warshadaha sida, xerada Guulwadayaasha, Lidka Taangiyada iyo Xarunta dhexe ee Gaashaandhigga. | JILYAALE_ONLINE
Dagaal culus oo Caawa maqrabkii ka billaabmay Xerooyinka ku yaalla agagaarka Wadada Warshadaha sida, xerada Guulwadayaasha, Lidka Taangiyada iyo Xarunta dhexe ee Gaashaandhigga.
September 30, 2007 by jilyaale
Caawa ayaa dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka waawayn iyo waxyaabaha qarxa kaasoo dhimasho iyo dhaacwacyo badan gaarsiiyay Gumeysiga Ciidamada Ethiopia, ayaa goor dhaw ka billowday qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho.
Dagaalkan ayaa ah mid aad u qaraar una dhexeeyo Ciidamada dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa Ethiopipia oo isku meel ah iyo Isbahaysiga dib u Xoreynta Soomaaliya ee fara kulul ku haya.
dagaalkan ayaa bilaawday Caawa Maqribkii ilaa iminkana socda, waxaana la maqlayaa dhawaaqa Madaafiicda oo si daran dooriya ay isku waydaarsanayaan labada dhinac.
goobaha sida tooska ah loogu dagaalamayo ayaa waxaa kamid ah Xeradii hore ee guul-wadayaasha iyo xerooyinkii Ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed oo hada ay ciidamada Cadowga Ethiopia Fadhiisin ka dhigteen iyo kuwa dowlada KMG ee Soomaaliya.
Dagaalka caawa ayaan laxaqiijin karin qasaaraha dhabta ah ee uu geystay, balse dad ka agdhow meelaha lagu dagaalamaya oo aanu ka wareysannay sida ay wax u jiraan ayaa nooga war bixiyay dagaalku in uu yahay mid sida caadada aheydba gabaldhicii lagu qaaday xerooyin ay Ciidamada Ethiopia iyo kuwa Dowlada KMG ah deganaayeen.
Maaha markii ugu horeysay ee xerooyin ay degan yihiin ciidamo katirsan Dowlada ama kuwa Ethiopia-ba lagu qaado weerarro noocan oo kala ah.
Waxaa habeennadamba socday dagaala cul culus oo lagu qaado meela ay degan yihiin Ciidamada Ethiopia iyo kuwa Dowladda KMG ah, jabab xoog lehna loogu geystay.
← Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf wuxuu rabaa inuu Xilka ka qaado Ra´isal Wasaare Cali Geedi, balse Cali Geedina muxuu rabaa isna??.
Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool ayaa sheegaya in dagaalkii ka socday deegaaka Abeesalaay uu sii xoogaystay. →